Indlela yokufaka FSX ku-Windows 8 / 8.1 / 10? - URikoooo
Indlela yokufaka FSX ku-Windows 8 / 8.1 / 10?
Ukufaka FSX (zonke izinhlobo) ku-Windows 8 / 8.1, landela lezi zinyathelo:
I-1- Faka FSX ngokujwayelekile ngamaDVD.
I-2- Uma ukufakwa sekuphelile, chofoza kwesokudla ku- « fsx.exe »(ungakuthola lapha: C: Amafayili wohlelo (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight Simulator X). Lapha, khetha ithebhu «Ukuhambisana» bese usetha iwindi njengoba kuboniswe ngezansi:
3- Download 32 Bits version of « UIAutomationCore », Vulela ifayela bese ulinamathisela FSXifolda eyinhloko (C: \_ Amafayela Ohlelo (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight Simulator X \_). Izolungisa inkinga yokuphahlazeka okungalindelekile kwe FSX.
Manje, ngemuva kwalezi zinyathelo ezincane, FSX kufanele ibe sezinzile ku-Windows 8 / 8.1 kanye ne-10